SomaliTalk.com » 2011 » July » 05
Home » Archive Maalinta July 5th, 2011
Waxaan ognahay liiska xukuumada in loogudbiyey Itoobiya.
Iyadoo Magaalada Adis Ababa ay ku sugan yihiin wafdi uu hogaaminayo Madaxweynaha Dowladda Federaalka Shiikh Shariif Shiikh Axmed ayaa Siyaasiga Zakeriye Maxamuud Xaaji Cabdi oo u waramayey Idaacadda Al-Furqaan isagoo ku sugan Magaalada London ee Cariga Ingiriiska ayaa wuxuu wareysigiisa ku sheegey in Wasiirka Warfaafinta Cabdi Kariim Xasan Jaamac uu Dowladda Itoobiya u gudbiyey Liiska Ciida ka mid...
Rooxaanland – III – Qaybta 3aad
Hordhaca Gunaanadka: Waxaa jirta in akhristayaal badani afkaar, talooyin iyo tusaalaynba kasoo dhiibteen 2dii qaybood ee hore ee maqaalka. Waxaan si kal iyo laab ah ugu mahadcelinayaa intii qoraalada sida hufan wax uga soo tiri, gaar ahaanna, waxgaradkii wax ku soo darsaday qaybtii 2aad ee aan ku lafagurayey arrimaha tayaaraadka. Waxaan qolada dambe u sheegayaa, inaan hadafkaygu ahayn inaan weeraro...
MAANSO: U hubsada wadaaddow
W.T Maxamuud Axmed Cabdalla (shiine) 07/01/2011 Dhammaan waxan salaamaynaa shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Waxan halka idiin ku soo gudbinaynaa maanso la magac baxday U hubsada wadaaddow oo uu tiriyey Maxamuud Axmed Cabdalla (shiine), maansadan oo waano ah ku socota wadaaddada dagaallada ka wada geyiga Soomaaliya. Afeef: Maansadan cid goonniya oo lagu aflagaadeeyey ma jirto, waxay si...